Isipuli sesekhethi esisele esinokuvikelwa kwe-Overcurrent (RCBO) Abakhiqizi nabahlinzeki - China Isipele Sesekethe Esishubile Sokuvikelwa Kwe-overcurrent (RCBO)
I-DABL-63 RCBO 6KA Insalela Yesekeli Yesekeli Esetshenzisiwe yamanje
Ama-breaker wesifunda asalayo asetshenziswa ngokuvikelwa ngokweqileI-DABL-40 yenzelwe ukuvikelwa kengozi kagesi uma kwenzeka ukwehluleka kokufakwa kagesi, ukuvimbela imililo ebangelwe ukuvuza kwamanje komhlaba, ukulayishwa ngokweqile nokuvikelwa kwesifunda okufishane.
Kunconyelwa ukuvikela imigqa yeqembu enikezela ngezitsha zokufaka zangaphandle, izinto zikagesi negaraji nokukhanyisa okuphansi.
I-DABL-63 Nova Series Residual Current Breaker Circuit Breaker Enokuvikelwa Kweqile
I-DAB7LN-40 uchungechunge lwe-DPN Residual yamanje Operation Circuit Breaker (RCBO)
Ama-breaker wamanje wesekeli we-DAB7LN -40 asele ngamadivayisi amancane aklanywe ngomthamo omkhulu wokuqhekeka (6kA) futhi afanelekile ukunqanyulwa kwemigqa engathathi hlangothi.Iziqhekezi zesekethe zisetshenziswa kabanzi ezinhlelweni zikagesi ezinamandla aphansi anamandla kagesi anezilinganiso ezingama-230V nezilinganisiwe yamanje engekho ngaphezulu kwama-40A. Lokhu kuvikela kahle abantu ekushayweni ugesi kanye nemishini yesekethe ifomu elijikelezayo noma elifushane.La ma-breaker wesekethe nawo afanelekile ukuvikela izingozi zomlilo ngenxa yemisinga yomhlabathi ebangelwe ukulimala kokufakwa kwemishini kagesi.
I-RCBO 4.5KA Residual yamanje Circuit Breaker Enokuvikelwa Kweqile
Isingeniso Ama-breaker wesifunda asetshenziswayo asele ngokuvikelwa okwedlulele kwe-ABDT-63 enzelwe ukuvikelwa kwengozi kagesi uma kwenzeka ukwehluleka kokufakwa kukagesi, ukuvimbela imililo ebangelwe ukuvuza kwamanje komhlaba, ukulayisha ngokweqile nokuvikelwa kwesifunda okufishane. Kunconyelwa ukuvikela imigqa yeqembu enikezela ngezitsha zokufaka zangaphandle, izinto zikagesi negaraji nokukhanyisa okuphansi.